Archive du 20200629
Andry Rajoelina Eto ihany ve sa lasa any ivelany ?
Miely amin’ny tambajotran-tserasera ny resaka amin’izao fotoana izao, fa lasa nisidina any ampitan-dranomasina ny faran’ny herinandro teo ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Antenimierandoholona Ho dinihina anio ny sata mifehy ny mpanohitra
Ho dinihina anio eny anivon’ny Antenimierandoholona etsy Anosikely ny sata mifehy ny mpanohitra.
Firenena Frantsay Hanome fanampiana 15 tapitrisa euros
Tamin’ny alalan’ny taratasy nalefan’ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron tamin’ny Filoha Malagasy Andry Rajoelina noho ny tsingerin-taona faha-60 nahazoantsika ny fahaleovantena no nilazan’i Emmanuel Macron,
Tranga hafakely Saika nototon’ny omby ny ben’ny tanàna
Saika zava-doza no nitranga ny sabotsy teo raha nanolotra fanampiana ho an’ny mpitandro ny filaminana ny kaominin’Antananarivo renivohitra (CUA).
Sekoly ambonin’ny polisim-pirenena ao frantsa Malagasy no nahazo salan’isa ambony indrindra
Ny Commissaire de Police, Hanitriniaina Ramiliarisoa, no nahazo ny salan’isa ambony indrindra na"Major de Promotion" tao anaty fiofanana nataony ao amin'ny sekoly ambonin’ ny Polisim-pirenena ao Frantsa.
26 Jona 2020 tany Fandriana Nanampy ireo mpiara-miasa aminy ny depiote Dina
Tsy diso anjara tamin’ny fanamarihana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara ny tany amin’ny distrikan’i Fandriana Faritra Amoron’i Mania.
Tononkira « salama fa mahia » Tsy misy ambadika, hoy ireo mpanankato …
Raha niteraka resabe teto amintsika ilay tononkiran’ireo mpanankato 35 mianadahy nitondra ny lohateny hoe : « Salama fa mahia » dia nivoaka tamin’ny fahanginana nanazava izany izy ireo ny faran’ny herinandro teo.
Mpianatra ao amin'ny LFT Mahazo vatsy isaky ny alarobia
Mahazo vatsy ara-tsakafo ireo mpianatra izay ao anaty sokajy "boursiers demi-pension"
Betafo – Vakinankaratra Mafana ririnina ny fankalazana ny fetim-pirenena
Sady nandray karama telo volana no nahazo fanomezana avy amin’ny Ben’ny Tanana ny mpiasan’ny Kaominina ambonivohitra Betafo Faritra Vakinankaratra tao anatin’izao fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantena. Nisitrakana izany fanomezana nohon’ny Asaramanitra izany ihany koa ireo mpanolotsaina rehetra ao amin’ity Kaominina ity.
Fasan’ny Karana Nodiovina tanteraka
Nodiovina Nanaovana asa fanadiovana faobe teny amin’ny tobim-piantsonan’ny zotra rezionaly sy nasionaly, teny amin’ny Fasan’ny Karana afaka omaly sabotsy 27 jona.
Betavoahangy Itaosy Nitsian’ny kamiao ilay moto
Nitrangana lozam-pifamoivoizana saika nahafatesan’olona teny amin’ny Betavoahangy Itaosy,
Faritra Atsinanana Manomboka amin` ny jolay ny fanamboaran-dalana
Mitohy ny asa fampandrosoana ao anatin` ny faritra atsinanana na dia eo aza ny ady amin` ny valanaretina “coronavirus”.
Krizy ara-bola sy ara-toekarena Nokantsanana ny tetibolan’ny minisitera maro
Nahena amin’ny ankapobeny ny tetibolan’ny minisitera sy ny andrim-panjakana samihafa ao anatin’ny volavolan-dalàna nasiam-panintsiana na ny LFR mitaha amin’ny LFI na ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola niaingana.
Fampiroboroboana ny Indostria Tsy ho vitan’ny fanjakana samirery
Tokony hifandrombonana ny fampandrosoana ny Indostria Malagasy araka ny fanambaran’ny Filohan’ny Filankevim-pitantana (PCA) n’ny Sendikan’ny Indostria Malagasy (SIM), Hassim Amiraly nandritra ny fandaharana tamina fahitalavitra tsy miankina iray omaly alahady.
LFR 2020 “Avereno hazavaina amin` ny vahoaka ny fandaniana”
« 1090 miliara Ariary izany “provision pour investissement”, 31% ny « déficit budgétaire », no niakatra 67% ny fiakaran’izay déficit budgétaire izay »
Ikalamavony Basy vita gasy 130 no tafaverin’ny mpitandro filaminana
Nahitam-bokany ny fanentanana ny mponina tao amin’ny Distrikan’ Ikalamavony hamerina ny basy tsy ara-dalàna eny am-pelatanany hamerenana amin’ny laoniny ny fandriampahalemana.
SEG Betongolo Manamboninahitra 22 nasondrotra grady
Tontosa ny sabotsy 27 jona teo ny fametahana ny galona ho an'ireo manam-boninahitra miisa 22 nisondrotra laharam-boninahitra tamin'ity taona 2020 ity, miasa ao amin'ny Foibe fibaikoana ny zandarimaria sy eo anivon'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria eto Antananarivo.
Analakely Miditra am-ponja 48 ora izay tratra mandoto
Manomboka izao, ho tanàna sy vahoaka miaina amin’ny fahadiovana no ho hita ao Analakely.
Akany Arivonimamo Nahazo fanampiana ireo zaza kamboty
Tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo zaza kamboty tazaina ao amin'ny Akany Zandarimaria (OGN) ao Arivonimamo ny fikambanana "Miray Aina Madagasikara",
Coronavirus Tafiakatra 18 ny maty, 2000 mahery ny voa
Olona roa indray no namoy ny ainy vokatry ny coronavirus, ka nampiakatra ny isan’ny maty rehetra hatrizay ho 18.
Fahamehana ara-pahasalamana Tsy mahataitra ny olona intsony
Tsy mivaky loha loatra amin’ilay fahamehana ara-pahasalamana intsony amin’ny ankapobeny ny ankamaroan’ny olombelona Malagasy hita eny anaty fiarahamonina eny.
Asam-panjakana Tsy miasa intsony ireo mpiasa marefo
Nivoaka teo anivon’ny minisiteran’ny asa, ny fampananan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy ny sabotsy teo ny naoty ho fampiharana ny fanambaran’ny filoham-pirenena ny 14 jona teo.
Ady amin’ny Coronavirus Niara-namoaka hira fanentanana ny mpanakanto
Nampahafantarina tao anatin’ny tambazontran-tseraseran’ny filohan’ny repoblika, Andry Rajoelina, omaly, ny fivoahan’ny hira fanentanana
Ady amin’ny Coronavirus Mila vonjy i Sainte-Marie
Mitaraina ny teraka avy any Sainte Marie fa tena lasa anjorombala izy ireo amin` izao fisian'ny aretina COVID-19 izao satria efa misy tranga voamarina maromaro any amin`io distrika io kanefa dia toa tsy jeren` ny fanjakana izany.